Nhau - Kuvhura Mhemberero yeFujian Nebula Kuedza Technology Co, Ltd.
Iyo yekuvhura mhemberero yekubata yakatsigira yeFujian Nebula Electronics Co, Ltd (Pano ichinzi Boka reNebula) - Fujian Nebula Testing Technology Co, Ltd (Hereinafter inonzi Nebula Testing) yakaitirwa zvakaomarara muMawei District, Fuzhou musi wa 26thChikunguru. Vatungamiriri vakakosha kubva kuMawei Dunhu, pamwe nevamwe vakakosha vakadai seCATL, Fujian Contemporary Nebula Energy Technology Ltd, TÜV, SÜD, nezvimwewo vakapinda mhemberero iyi.
Kumisikidzwa kweNebula Testing idanho rakakosha rekushandurwa nekusimudzirwa kweboka reNebula kubva kugadziri wemidziyo yezvigadzirwa kuenda kubhizimusi rebasa. Inogona kubatsira vatengi vepakati kugadzirisa matambudziko akadai seasina kukwana bvunzo zviwanikwa & nzira, uye zvishandiso mabasa asingakwanise kuzadzisa zvido zvemasimba bhatiri kukura. Zvakare, zvinogona kutibatsira kuti tigare tichigadzirisa nekuvandudza zviripo zvekuyedza michina nemabasa matsva, kuti tiwedzere kukwikwidza kwezvigadzirwa kuburikidza nemusika. Panguva imwecheteyo, nekuvandudzwa kwesimba kweindasitiri yeInternet uye nekuchenjera kugadzira, kufunga kwekubatana kwehungwaru nekutungamira kuri kuwedzera kukosha. Nebula boka rinotarisira kuona akangwara kugadzira kubva kwetsika kugadzira, uye vanoona maindasitiri cheni kusanganisa kwemaindasitiri makuru data ongororo uye kunyorera kunoenderana neindasitiri Internet.
Kuedzwa kweNebula kwakatanga kuvaka yekutanga yekumba zvine hungwaru bvunzo yakazara mhinduro yekushandisa zvinoenderana neIndasitiri 4.0. Iyo "Simba Bhatiri Kuyedza Big Data Intelligent Management Platform Shanduro 2.0" yakagamuchirwa naNebula Testing chigadzirwa chine kodzero dzakazara dzakazvimirira dzepfuma dzeboka reNebula. Nebula Kuedza kwakanyatso kuona bhizinesi manejimendi chikuva, pane-saiti manejimendi, uye epakati boka rekudzora ungwaru mushure megore rinenge rimwe rekugadzirwa kwechigadzirwa. Yakangwara yekutarisa yepuratifomu chikuva yakavakirwa kuti ione kungwara kuronga, otomatiki yekutevera, uye yambiro yekuchenjera yenzvimbo yekuyedza, otomatiki chiyero chefekitori simba rekushandisa, kure oparesheni uye kugadzirisa kuongororwa kweyekuedzwa michina uye mamwe mabasa kuburikidza nekubatanidzwa kwedata hombe. algorithm tekinoroji uye manejimendi. Zvinogona kutaurwa kuti iyi parizvino ndiyo hombe uye yepamberi yechitatu-bato rabhoritari yemagetsi bhatiri module uye kuyedzwa kwesystem kuChina.
Kuumbwa kweNebula Testing Company hakungori chete chigadzirwa chakakwana cheNebula yeboka renguva refu inoenderera nekuvandudza uye shanduko, asi zvakare mhedzisiro yakanaka yehutungamiriri hwemakomiti emapato nehurumende pamatanho ese uye rutsigiro rwevatengi nevatengesi. Mune ramangwana, boka reNebula rinoenderera mberi nekuwedzera muganho wekudyidzana nevakabatana kwazvo mumaindasitiri akasiyana siyana, kushanda pamwe chete kugadzira mikana mitsva, kupa vatengi zvigadzirwa zvakawandisa uye masevhisi, uye kugadzira mhedzisiro yakanaka pamwechete!
Post nguva: Jul-27-2019
Bhatiri Kubuda Kwakaita Kugona Tester, Bhatiri Kubuda Tester, Battery Zvoga Kuedzwa Zvekushandisa, 18650 Muedzo, 48v Bhatiri Kugona Kuburitsa Tester, Zvishandiso zveBhatiri Ekuyedza,